Soomaaliya: Xukuumadda, EU-IOM iyo qorshaha dib u dejinta muhaajiriintii la soo celiyay – Kasmo Newspaper
Updated - March 22, 2018 12:13 pm GMT
London (Kasmo), Xukuumadda Soomaaliya oo kaashanaysa Midowga Yurub EU iyo Ururka Muhaajiriinta Caalamiga ah IOM ayaa daaha ka furtay Mashruuca ‘Reintegration Facility’ oo lagu caawinayo ila 1,000 muhaajiriin Soomaali ah oo ka soo laabatay dal dibadda ah.
Tillaabada waxaa kale oo lagu caawinayaa sidii ilaa 1,000 muhaajiriin Itoobiyan ah oo hadda ku sugan Soomaaliya, ay dalkooda ugu laaban lahaayeen, dibna ugu biiri lahaayeen bulshadooda.
Ergayga gaarka ah ee xuquuqda carruurta muhaajiriinta ah, Maryam Yassin, ayaa sharraxaad ka bixisay in ujeeddada qorshuhu tahay sidii dib ugu soo laabashada bulkshada loogu samayn lahaa habka ugu nabadgalyada fiican, mar haddii muhaajiriintu badankood soo mareen waaya-aragnimo xanuun badan.
Daahfurka Barnaamijka oo dhacay 20kii March, Madaxa Ergada IOM ee Soomaaliya, Dyane Epstein, waxay caddeysay in si barnaamijku waxtar u noqodo loo baahanyahay taageerada xubnaha ku shaqada leh oo idil.
Gaar ahaan wada shaqaynta EU iyo Xukuumadda Muqdisho, Epsten waxay caddeysay in mashruucu dhalin doono iskaashi qoto dheer oo lala yeesho Soomaaliya.
Tillaabadan waxay qayb ka tahay qorshe ballaaran oo EU iyo IOM wadajir u bilaabeen 15kii Disember 2016 kuna saabsan soo laabashada muhaajiriinta iyo dib ugu celinta bulshada, iyada oo loo marayo siyaasado iyo wadiiqooyin ku qotoma xuquuqda iyo badbaadada.
Barnaamijka wadaagga ah ee EU iyo IOM lagana maalgaliyo Sanduuqa mucaawinooyinka ee Midowga Yurub, waxaa lagu asaasay iskaashiga 26 dal oo Afrikaan ah.